Zimbabwe Open for Business, Code for International Finance Capitalism | Black Agenda Report
Over the last four months, peddling the mantra “Zimbabwe is open for business,” the country’s new president in cahoots with the Western press has been whitewashing a military coup into a popular, peaceful revolution that brought from exile a benevolent leader and placed him in power on an interim basis until elections. Omitted from the portrayal of the March 11, 2018 op-ed, “We Are Bringing About the New Zimbabwe,” published in the New York Times and by-lined to Zimbabwe’s sitting president, Emmerson Mnangagwa, are all the maneuvers selling out the country’s political independence. Given reports of what happened to some of ZANU-PF’s G40 faction, including the killing of a bodyguard, and jailing with allegations of torture from November 14, 2017, until at least Robert Mugabe resigned as president a week later, the accounts in Mnangagwa’s op-ed are a pretty audacious rewriting of history.
Netfa Freeman is an Analyst and Events Coordinator for the Institute for Policy Studies (IPS), a longtime organizer in the Pan-African and international human rights movements, and former Liaison for the Ujamma Youth Farming Project in Gweru, Zimbabwe. He also hosts and produces the radio show Voices With Vision on WPFW 89.3 FM in Washington DC
Zimbabwean Communists Say Handing Over Mineral Resources to Foreign Firms is Treason
Zimbabwe’s new “open for business” posture apparently means, “Come and take all of our resources.”
Amid some brief gunfire and few explosions military spokespeople in Zimbabwe declared